Ngwá Ọrụ Na-arụkọ Ọrụ & Ahịa - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ngwaahịa & Ahịa
Learn mụta ịkwanye ngwa, bugharịa ma dozigharịa ngwongwo n'ụlọ nkwakọba aka site na enyemaka nke forklift. Na mgbakwunye, ị na-amụta ịkwadebe iwu site na sistemụ kọmputa site na ịkwadebe ngwongwo ndị ahụ. Agbanyeghị, ịrụ ọrụ nkịtị na-adị mkpa mgbe niile na ụlọ nkwakọba ihe. Lọ nkwakọba ihe dị ọtụtụ mma ma chọọkwa ka gị na ndị ọrụ ibe gị rụọ ọrụ nke ọma.